Omar Sayid Abdilahi: Safarkii Dubai
Maalintii ay taariikhdu ahayd 4 September,2016, waxaanu safar shaqo ku tagnay dalka imaaratka carabta gaar ahaana magaalada Dubai aniga iyo wasiiru dawlaha wasaarada duulista hawada iyo gaadiidka cirka Axmed Nuur Faahiye.
Waa markii koowaad ee aan dal carbeed oo khaliijka ku yaala u safro
Waxaan aad ula yaabay sida ay u horumartay Dubai, oo ah magaalo cajiib ah oo aanan waligay mid la qurux ah arag intaan safrayay.
Sidoo kale waxaan la yaabay, sida dhaqankii iyo muuqaalkii diinteena suuban ee islaamka loogu liiday magaalada Dubai, adiga oo aan kala garanayn halkani ma New york ba mise waa dal carbeed oo muslim ah oo waliba khaliijka ku yaala.
Waxaanu la kulanay madaxda shirkada Fly dubai, iyo madaxda shirkada Daalo iyo Juba.
Ka bilaw midig. Aniga, Mr sudhiir Seredheren, senior vice president commercial, Wasiiru dawlaha ahmed nur fahiye iyo Wakiilka shirkada ee somaliland Omar safeway.
Kulamadayadii oo aan diirada ku saarnay arimo badan oo ku saabsan iskaashiga aanu ka yeelanayno shaqada aanu qaranka u hayno ka wasaarad ahaan iyo adeegada ay iyagu dadka u fidiyaaan wuxuu ku soo gabagabooy si guul ah.
Waxaanu sidoo kale ka qayb galnay xafladii u dabaal dega heshiishka DP world ee dekeda Berbera oo jaaliyada Somaliland iyo waftigii xukuumadu isku waraysteen.
Waxa aan aad iyo aad uga mafsuuday Ambassador Cabdilahi Kongo oo ku hadlayay afka jaaliyada reer imaaraad ee somaliland oo si buuuxda u taageeray heshiishka DP world.
Cabdilahi Kongo waa siyaaasi soomaaliyeed iyo diblomaasi fogaaday oo ku fogaaday arimaha carabta iyo somalida, waana runtii ashkhaasta aad iyo aadka loo ixtiraamo.
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 1:01 AM
Pablo (yo) 13/10/16